Toerana Internet an-tserasera estoniana - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
Loading ...Na eo aza ny zava-misy tato anatin'ny taona vitsivitsy dia tsy maintsy nandalo fotoan-tsarotra maro ny filokana estoniana - ny krizy ara-bola manerantany ary ny fanamafisana ny lalàna avy amin'ny governemanta, ary ny fotoana ratsy hafa - mbola manohy miasa tsara ihany izy, fa mampandroso ihany koa .
Mazava ho azy, ireo anton-javatra rehetra ireo, raha ny filazana, dia nandray anjara tamin'ny "fanadiovana" sasany teo amin'ny laharan'ny mpiasan'ny filokana. Ny tompon'ireo trano filokana kely dia tsy maintsy nanidy azy ireo noho ny tsy fahaiza-mitady tombony, fa ireo trano filokana goavambe kosa dia nampitombo ny vola azony. Nandray anjara tamin'ity sy ny fisokafan'ny casino an-tserasera.
Ny fahombiazan'ny Estonianina fahombiazana lehibe indrindra dia mankafy ny roulette, fa tsy lavitra azy intsony dia ny milina poker sy slot. Angamba eto no hanao ny loteria ho an'ny fanjakana sy Eesti Loto. Rehefa dinihina tokoa, araka ny antontan'isa, nilalao efa ho 80% ny olom-pirenena Estonianina.
Na dia milaza aza ny Baltic fa tia fialam-boly filokana, saingy Ny ankamaroan'ny fidiram-bolan'ny kino any Estonia dia mahazo avy amin'ny mpizaha tany . Noho ny fifaninanana eo amin'izy ireo dia ny Failandy, noho ny akaiky ny firenena roa tonta. Vao haingana anefa dia misy ny fironana manondro fa ny trano filokana ao an-toerana matetika dia vahiny ny Rosiana, ary ny isan'izy ireo dia hitovy amin'ny Finnianina atsy ho atsy.
Raha ny filazan'ny minisiteran'ny fizahantany estoniana mandritra ny taona, dia olona 800,000 no mitsidika any Failandy, nefa nandany 1.6 tapitrisa alina koa izy ireo teto. Amin'ny laharana faharoa dia ny Rosiana no ao ambadiky ny Finnà quadrupled. Rariny raha milaza fa ireo tarehimarika ireo dia tsy nahitana ireo izay nijanona niaraka tamin'ny namana na havana, tonga tany Estonia nandritra ny iray andro na tonga teto tamin'ny sambo fitsangantsanganana.
Raha amin'ny taona ny Rosiana tanora kokoa noho ny Failandey sy Suède. Mifanohitra amin'ireo mpizahatany Skandinavianina, mandany vola be kokoa ny Rosiana. Tsy ny trano fandraisam-bahiny lafo vidy ihany no safidin'izy ireo, fa koa ireo izay misy trano filokana. Ary ny vola navelany mihoatra lavitra noho ireo mpifanila vodirindrina aminy avaratra amin'ny fanantenana hahazoana valisoa lehibe.
Lisitry ny Top Tenim-panjakana Online amin'ny 10 Estonian Casino
Ny fampandrosoana ny orinasa filokana ao Estonia
Ny Casinos voalohany dia niseho tao amin'ny firenena taoriana kelin'izay, nitsahatra tsy nisy ny Firaisana Sovietika ary nahazo fahaleovan-tena ireo repoblika teo aloha. Ny hafainganam-pandehan'ny asa filokana any Estonia dia mahatalanjona fotsiny. Indrindra taorian'ny nahatongavan'ilay firenena ho mpikambana EU. Ankehitriny ny manampahefana dia nametraka fanitsiana henjana kokoa momba ny lalàna mifehy ny orin'asa filokana, saingy ny mahagaga dia izy ireo ihany no mahazo tombony.
Sarotra inoana, fa efa-taona lasa izay, Estonia dia nanana filokana 200 (trano filokana, efitrano fanaovana milina sns ...). Izy ireo dia tompon'ity harena 19 ity, ary fifaninanana matotra no natao. Ny toetrandro fampiasam-bola manintona taty aoriana dia namorona toe-javatra iray izay tsy nanjary tsy nahomby tamin'ny filokana rehetra ny mpilalao. Ao amin'io fehezan-dalàna io ihany dia tsy misy fepetra fameperana. Izay te hanokatra orinasa filokana dia afaka manao izany eto Estonia nefa tsy misy olana. Raha vao nekena ny fanitsiana ilaina eny an-tsena dia ireo mpilalao lehibe ihany no noterena hiala ireo mpifaninana aminy kely kokoa.
Tianay ny manamarika fa ny manam-pahefana estonianina dia nandefa ny tombotsoan'ny olom-pirenena rehetra miankina amin'ny fialamboly filokana. Ny casino rehetra dia mandoa taha ambony, fa ny ankamaroan'ny vola azo kosa dia mivoatra amin'ny fivoaran'ny kolontsaina (46%). Ny ambiny dia zaraina eo amin'ny Vokovoko Mena sy ny famatsiam-bola ny programa izay mamela anao hanome fanampiana ho an'ireo mila fanampiana, anisan'izany ny ankizy.
Ireo fitaovana ireo ihany dia nandamina tetik'asa sy hetsika ara-kolotsaina maro: boky misy, fety, nanala ny sarimihetsika ary maro hafa. Na eo aza ny zava-misy any Estonia sy ireo faritra ireo dia ara-bola amin'ny teti-bolam-panjakana, dia vola ampiasaina matetika no azo avy amin'ny fihenan'ny hetra amin'ny filokana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ireo mpilalao mamela vola ao anaty casino, ary mamatsy vola ny ankamaroan'ny tetik'asa sy hetsika ara-kolontsaina, ary ny vola ambim-bola avy amin'ny tahirim-bolam-panjakana dia zavatra lehibe tokony hatao.
Na dia misy lehilahy aza milalao ao amin'ny kasino estonianina dia misy fepetra takiana amin'ny fitsidihany. Noho izany, raha manapa-kevitra ny handeha hanome fahafaham-po ny fahatsapana fientanam-po ianao dia aza adino ny mitondra ny pasipaoronao na antontan-taratasy hafa mamela anao hahafantatra anao. Amin'ny fotoana fitsidihany ny fametrahana filokana dia tsy maintsy farafaharatsiny 21 taona ianao. Eo am-pidirana amin'ny mpitsidika casino dia misy fisoratana anarana tsotra.
Mahagaga fa rehefa voafetra ny taona dia na ny ankizy aza dia mbola afaka miditra amin'ny filokana ary mandany fotoana amin'ny basy masinina amin'ny sambo fitsangantsanganana na mpandeha. Voafetra ho an'ny ankizy sy ny filokana farany ambony, izay 10 euro.
Misy ny fepetra takiana sy ny fametrahana trano filokana. Izy ireo dia azo apetraka amin'ny tranobe misaraka, ary ampahany amin'ny trano fandraisam-bahiny, fialamboly na ivontoerana fiantsenana. Ny fepetra takiana dia famoahana misaraka.
Nanomboka tamin'ny 2012, ireo orinasa filokana dia navela hampiakatra ny isan'ny milina ao amin'ny efitrano filokana ho 40. Amin'ny lafiny iray, azo atao ny manitatra ny isan-karazany amin'ny fialamboly amin'ny lafiny iray hafa - kapoka mafy amin'ny trano kely casino, izay nanjary nifanakaiky tamin'ny farany, tsy nahatanty ny fifaninanana. Tao anatin'izay taona faramparany izay dia saika antsasaky ny isan'ireo trano filokana nefa tsy nisy fiatraikany tamin'ireo mpitsidika izany.
Ao anatin'izany rehetra izany dia misy ihany koa ny plus. Ny fampihenana ny isan'ireo trano filokana nosintonina tamin'ny fihenan'ny isan'ny mijaly amin'ny filokana. Lisitry ny olona nalefa tany amin'ny tompon'ny departemanta momba ny hetra sy ny fadin-tseranana. Ny tena mahaliana dia tsy misy manery anao hiditra ao aminy hampiditra azy - an-tsitrapo tanteraka izany ary miankina amin'ny fahavononan'ilay mpilalao. Miara-miasa amin'ny lisitry ny banky, ny fivezivezena amin'ny fitadiavana vola amin'ny kaontin'ny mpiloka be loatra ary tsy mamela azy ireo hampindrana.
Aiza no hilalao any Estonia
Any Estonia dia hahita karazana kazao be dia be ianao . Ary tsy mihatra amin'ny eto an-drenivohitra ihany izany. Ny casinos be mpitsidika indrindra sy lehibe indrindra no hita, ankoatra an'i Tallinn, Narva, Tartu, Pärnu ary Jõhvi.
Estonia - toeram-pialan-tsasatra lehibe ity izay mifanaraka tsara amin'ny mpankafy fitsaharana mangina sy ny natiora tsara tarehy. Tallinn fahiny, malaza amin'ny spa Pärnu sy Saaremaa - ireo toerana ireo, ary koa ny maro hafa dia manintona ireo mpizahatany eran'izao tontolo izao hamatra ny refy, ny tsangambato maritrano ary ny fialamboly. Azo atao ve ny mandeha any amin'ny casino any Estonia, na milalao kasino amin'ny Internet? Andao hojerena!
Casino ao Estonia:
Lalàna estoniana momba ny filokana - vaovao ara-tantara tamin'ny 1990 ka hatramin'ny 2017;
Ny mpandraharaha iraisampirenena dia voasaina sy voasakana;
Misy lisitr'ireo tranonkala nahazoana alalana sy voasakana (misy rohy amin'ity lahatsoratra ity);
Ady mafy amin'ny mpitsidika aterineto;
Ny fidirana amin'ny casino-tany dia 21 taona.
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny filokana ao amin'ity firenena ity sy ny sarimihetsika lehibe «Reval Park» dia vakio ny lahatsoratray.
Ny lalàna estoniana momba ny filokana - tantara ara-tantara
Nahazo fahaleovan-tena tamin'ny Firaisana Sovietika i Estonia tamin'ny taona 1991, fa hatramin'ny faran'ny 80-n'ny taonjato XX tany amin'ny firenena dia nanomboka nampivelatra ny indostrian'ny lalao. Zava-nisongadina tamin'ity fivoarana ity, sy ny lalàna mifehy ny lalàna, asehontsika amin'ny endrika latabatra.
taona Fanovana ny lalàna sy
1989 Ny sambo "Georg Ots" no lasa efitrano filalaovana voalohany, izay nilalaovan'izy ireo vola. Ny casino voalohany ao amin'ny hotely "Palace" an'i Tallinn.
1990-1994 Ny fisokafan'ny tambajotram-pifandraisana toy ny Casino Olimpika, Casino Kristiine, vondrona Casino Play-In. Ny fanjakana dia manome lisansa.
1995 Lalàna N 580 "Momba ny filokana". Miasa izany amin'ny fanovana sy fanitsiana marobe. Ny zo handamina ao amin'ny Fanjakana, izay afaka manome fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa tsy miankina. Aza hadino ny mahazo fahazoan-dàlana amin'ny hetsika filokana (toy ny hetsika isan-karazany - mandritra ny 10 taona) ary fahazoan-dàlana handamina lalao filalaovana (ny zo hanokatra orinasa filokana amin'ny toerana manokana - mandritra ny 5 taona).
1997 Doka amin'ny filokana fa ny doka any amin'ny orinasa filokana. Ny fisokafan'ny Fikambanan'ny mpandraharaha ny lalao filokana Estonia.
2008 Ny fanamafisana ny lalàna "Momba ny filokana" - kara-panondro foana, raikitra ny mpitsidika rehetra, azon'ny mpilalao, amin'ny fangatahany manokana handrarana ny casino avelany izy (amin'ny fiarovana Gamblers). Ny fetran'ny tena amin'ny filokana estonianina dia afaka mametraka ny Birao momba ny haba sy ny haba.
2009 Ny fananganana ara-dalàna ny casino an-tserasera - fahazoan-dàlana amin'ireo mpandraharaha ara-dalàna ary manakana ny tsy ara-dalàna. Ny filokana an-tserasera dia tokony ho an'ny olon-dehibe ihany, ary koa ny mamantatra ny mombamomba sy ny toerana onenan'ilay mpilalao. Ireo mpandraharaha vahiny hametraka ara-dalàna ny asany dia mety hanao fifanarahana amin'ireo mpandraharaha eo an-toerana, izay miasa ara-dalàna any amin'ny faritanin'i Estonia. Ny tranonkala vahiny hafa tsy ara-dalàna rehetra dia sakanan'ny mpiasan'ny tamba-jotra, amin'izao fotoana izao dia lasan'ny 1000 ny lisitr'ireo voarara amin'ny mpandraharaha vahiny estonianina.
Kasino an-tserasera - midika inona ho an'ireo mpilalao ireo lalàna ireo?
Any Estonia, mifandraika amin'ny filokana dia ampiasaina antsoina hoe rafitra fanaraha-maso voafehy - izany hoe tsy voarara ny filokana, fa ambanin'ny 100% fehezin'ny fanjakana. Mihatra amin'ny ivelan'ny Internet izany ho toy ny filokana an-tserasera sy filokana an-tserasera amin'ny Internet.
Ny online casino ao Estonia dia tokony havaozina eto amin'ity firenena ity, ary milalao tanteraka azy ireo.
Casino any ivelany tsy misy fahazoan-dàlana any Estonia, làlana sy sakana. Raha tsy tafiditra ao amin'ny "lisitra mainty" ny casino dia afaka mandeha any izy amin'ny fotoana rehetra ary mety ho olana ny tombom-barotra.
Ny mpilalao dia tokony ho amin'ny taona ara-dalàna. Ny tahiriny dia voatahiry ao anaty tahiry manokana an'ny mpilalao.
Kaonty voavily sy fandresena - ny vola dia tsy azo afindra amin'ny kaonty nanaovana fametraham-bola fotsiny (izany dia atao mifanohitra amin'ny fisian'izany "vola voadoka" izany).
Casinos tsy navela tany
Ny casino nahazoan-dàlana dia afaka mitsidika olon-dehibe (karatra maha-mari-tsoratra).
Ho an'ny miankina amin'ny lalao dia misy ny mety ho fandavana noho ny fanambarana manokana ao amin'ny Birao sy ny Customs Board, avy eo ny casino dia tsy manana zo hamela ilay mpilalao.
Ho an'ny casino ara-dalàna dia misy ny fepetra mazava sy hentitra, noho izany ny asa fanompoana nataony ho an'ny Eoropeana avo lenta, izay lehibe kokoa ho an'ny mpilalao.
TIreo fepetra hese dia mety mitaky ny fepetra dopolnitenyh
Tallinn, Estonia: tanànan'ny tilikambo sy casinos
Kolyvan, Rewal, Revel - antsoina hoe Tallinn taloha. Ny tanàna farafahakeliny 900 taona. Ny dikan'ny anaran'ny renivohitra "Lapan'i Danemarka", "tanàna ririnina" Na tsotra fotsiny "Hidin-trano".
Tallinn - seranan-tsambo eropeana malaza ary mariky ny kolontsaina manerantany - noho ny ilay tanàna tranainy . Ao amin'io faritra amin'ny tanàna io dia nitahiry trano maro taonjato faha XI - XV, anisan'izany ny tilikambo maro be.
Ny tantaran'ny firenena dia mifamatotra akaiky amin'ny tantaran'i Russia. Tsy indray mandeha Estonia dia anisan'ny USSR, fa miezaka hatrany hanana fizakan-tena. Tamin'ny 1991, nahazo ny fahaleovan-tena ny firenena.
Casino ao Tallinn
Tallinn - araka ny fenitry ny renivohitra, dia kely dia kely ny tanàna, mponina 430,000 40 fotsiny. Na izany aza, "casino" XNUMX eo ho eo izy io. Ny Casinos any Estonia dia misy filokana rehetra - klioba kely misy milina filokana, efitrano kely ao amin'ny hotely misy latabatra filalaovana vitsivitsy ary, mazava ho azy, trano filokana lehibe be kilasy.
Any an-drenivohitr'i Estonia, dia mpizahatany maro foana - matetika ny Finnianina ary ny Soedoà dia avy any Failandy sy Suède. Izany no antony nahazatra ny vahiny ny mpiasa casino ary afaka manompo azy ireo.
Ny casino lehibe indrindra eto an-tanàna - ny Reval Park amin'izay . Ity dia klasika (amin'ny heviny tsara indrindra amin'ny teny) ny andrim-panjakana misy hotely tsara sy efitrano filalaovana mahafinaritra.
In ny Reval Park amin'izay slot eo amin'ny zato eo ho eo, misy ny roulette, baccarat, blackjack ary ny efitrano poker. Etsy ankilany, tany Estonia dia nanao fifaninanana poker iraisam-pirenena maromaro, ka zatra ny vahiny sy ny mponina ao an-tanàna izao karazana hetsika izao.
Ny kazôza lehibe indrindra dia an'ny tanàna ny Olympic Entertainment ny Ny vondrona dia , izay manana toeram-pametrahana any amin'ny firenena Baltic hafa ary any Polonina, Slowakia ary Belarus.
Ny fidirana amin'ny casino dia avela ho an'ny olona mihoatra ny 21 taona, tsy azo atao ny akanjo - raha tsy amin'ny "sportivkah" dia tsy avela.
Estonia amin'ny sari-tany Eoropa
1. Tanana haolo: ny toerana tokony alehanao voalohany. Ny fakany ny tantaran'ity faritra ity dia hatramin'ny taonjato faha-13. Raha sendra any amin'ny tontolo hafa ianao: ny vato mandrakizay ambanin'ny tongotra, ny lalana tery mahafinaritra, ny trano tena izy, voatahiry amin'ny hatsarany tany am-boalohany.
At ny Kianjan'ny Town dia be dia be ny kafe, trano fisakafoanana sy ny isan-karazany fivarotana mahaliana, boutiques. Hevitra tena tsara hitsangatsangana mankany an-tampon'ny Tanàna Tanana, Vyshgorod , izay manome endrika miavaka ny tanàna sy ny ranomasina.
2. Daka-in-de-Kok: iray amin'ireo tilikambo malaza indrindra an'ny tanàna taloha, izay voahodidin'ny - azafady ny tautology - rindrina matevina. Adika ny anarany hoe ” Jereo ao an-dakozia ” - satria tena miharihary fa manomana olona amin'ny trano akaiky.
Kiek in de Kok efa ho 40 metatra ny haavony, ny hatevin'ny rindrina - 4 metatra.
Raha reraka be ianao amin'ny fiderana io goavambe io avy any anatiny sy ivelany, dia afaka mandeha amin'ny dia mahagaga amin'ny alàlan'ny lavaka fantsona mihodina eny amin'ny rindrin'ny tanàna.
3. Kadriorg: ny lova fantatry ny fanjakana rosiana - ny lapan'i Peter I. Nanomboka tamin'ny 1718 ny fananganana, tranombakoka ankehitriny ao amin'ilay trano.
Kadriorgtakzhe nantsoina Ekaterinentalem - “Lohasahan'i Catherine.” Ny lapa dia voahodidin'ny valan-javaboary mahafinaritra miaraka amin'ny loharano, vorona ary voninkazo.
Tsy lavitra ny lapa ny Museum of Modern Art Kumu, iray amin'ireo tranombakoka lehibe indrindra any Eoropa Avaratra sy Atsinanana.
Mponina : 1,293 tapitrisa
Teny iombonana : Estonianina, Rosiana, anglisy
Sandam-bola : EUR.
Ho an'ny olom-pirenen'i Rosia dia mila izany visa .
0.1 Lisitry ny Top Tenim-panjakana Online amin'ny 10 Estonian Casino
2.0.1 Ny fampandrosoana ny orinasa filokana ao Estonia
2.0.2 Anarana iombonana amin'ny teny estoniana
2.0.3 Aiza no hilalao any Estonia
3 Gambling in Estonia
3.0.1 Ny lalàna estoniana momba ny filokana - tantara ara-tantara
3.1 Kasino an-tserasera - midika inona ho an'ireo mpilalao ireo lalàna ireo?
3.1.0.0.2 Casinos tsy navela tany
3.1.1 Tallinn, Estonia: tanànan'ny tilikambo sy casinos
3.1.2 Casino ao Tallinn
3.1.3 Estonia amin'ny sari-tany Eoropa
3.1.4 Toetran'i Tallinn
3.1.5 Facts about Estonia
bovegas tsy misy code code 2020